Soomaalida oo kaalinta labaad kaga jirta ajaanibta ugu badan xabsiyadda Deenmark | Somaliska
Soomaalida qurbaha timid siiba kuwooda yimid dalalka waqooyiga Yurub ee Iskaandaneefiyanka ayaa ah bulsho horumar iyo dib u dhac inta leh hadana aaneey dhanicooda horumarineed muuqan marka la bar bar dhigo qowmiyadaha kale ee dalalkaa gees nagala dagan.
Dalka Deenmark, ayaa hey’add tirro koob ka sameeysa ajaanibta xabsiyada dalkaasi siyaalo kala duwan ugu xiran ayaa tibaaxday in soomaalidu yihiin qowmiyadda labaad ee xabsiyada dadkeedu ku jira, kuwaas oo tiradooda lugu sheegay 77 ruux sida aad shaxdaka muuqata. Dadyowgan ku xiran xabsiyada Deenmark, ayaa 30% (boqolkiiba soddon) yihiin dad dhawaan dalkaasi soo galay. Tirro koobkan ayaa sidoo kale lugu sheegay in boqolkiiba lix ay kor u kac ku timid maxaabiista xabsiyada Deenmark ku jira lixdii sanno ee ugu dambeeysay.
Soomaalidan 77-ka ruux ah ee xabsiyada dalkaasi ku jira ayaa ah kuwo heeysa dhalasho deenish ah, balse ay jiri karto tiro kale oo intaas ka badan oo aan weli la xusin. Soomaalidan ayaa kiisas kala duwan u xiran, halka qaar kalena ay yihiin dacwad sugayaal iwm. Waxaa taagan dood lugu doonayo in ajaanibta falal dambiyeedka geeysta dib loogu celiyo dalalkoodii.
Iswiidhan waxaa ay ka mid tahay dalalka ay soomaali badan u soo hayaameen, iyaggoo dib u dhac iyo hurmar intaba leh ayaa haddana mudooyinkii ugu dambeeyey waxaa aad u soo baxayey falalka aad u fool xun oo ay dhalinyarro soomaali ah ku kaceen kuwaas oo aad saxaafadda qeybaheeda kala duwan u hadal heeysay. Dhacdadii ugu dmabeeysay ayaa ah markii bishii ina dhaaftay afar dhalinyarro soomaali ah la sheegay in dacwad loogu soo oogayo sabab kufsi ay u geeysteen gabar yar oo 14 jir aheyd magaaladda Västerås ee bariga Iswiidhan.